Isicelo se-Mica e-Resin nasePulasitiki Izimboni | I-Lingshou
Isicelo se-Mica e-Resin nasePulasitiki Izimboni
(1) Ukuguqula Izakhiwo Zokukhanya Zepulasitiki
Ama-Mica chip angabukisa futhi akhanyise imisebe ye-infrared futhi amunze futhi avikele i-UV, njll. Ngakho-ke, uma wengeza ama-mica asezingeni eliphakeme emvula kumafilimu ezolimo, kuzoba nzima ukukhanya ukuthi kuphume ngemuva kokungena ngaphakathi, ngaleyo ndlela kulondolozwe ukushisa kugesi wokushisa nefilimu yepulasitiki yasensimini, njll. Kulolu hlelo, ukuhlanzeka nokwakheka okungenamsoco kwe-mica powder kubaluleke kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukungcola kuzonciphisa i-mica yokuqina kokukhiqizwa kwayo, kuthonye ukuvela kwayo, kwandise inkungu futhi kunciphise ukungena okukhanyisela ngaphakathi kugesi. Ngakolunye uhlangothi, uma i-mica ingekuhle ngesakhiwo esintekenteke, khona-ke umphumela wayo wokuvimbela imisebe ye-infrared nawo mubi. AbakwaGansu Gelan Chemical Technology Co, Ltd., baseHong Kong Lee Group bake basebenzisa i-mica yenhlabathi emanzi ukwenza ifilimu yezolimo, kuphela ukunciphisa ukubonakala kwayo ngo-2%.
Izidakamizwa, izimonyo, ukudla neminye imikhiqizozidinga ukuvikela imisebe, ikakhulukazi imisebe ye-ultraviolet, ukuthuthukisa ukusebenza kwazo. Ukuze senze lokhu, singangeza i-mica powder ehlelwe kahle yi-flake ehlelelwe i-flake kuzinto zabo zokupakisha zepulasitiki. I-mica filler enobukhulu obukhulu ingathuthukisa i-luster yezinto zokwakha (umphumela we-pelescent), futhi i-mica powder enhle ingasusa i-luster.
(2) Ukuthuthukisa ukuqina komoya we-Plastics
I-Wet ardica mica powder inesakhiwo sephepha elincane elincanyana, elinobukhulu kuma-nanometers kanye nobubanzi besilinganiso sobubanzi bufika kuma-80 ~ 120 times, ngaleyo ndlela ibe nendawo enkulu kakhulu yokuvimba. Ukuqina komoya wepulasitiki kuzokhuphulwa ngokumangazayo ngemuva kokungezwa nge-mica powder ephezulu nenekhwalithi ephezulu. Amapulasitiki anjalo, ngokuya ngezincwadi ze-patent, angasetshenziswa ukwenza Amabhodlela e-coke, amabhodlela obhiya, amabhodlela emithi, izinto zokufaka umswakama kanye nezinhlobo eziningi ezifanayo ezikhethekile zokufaka izinto epulasitiki.
(3) Ukuthuthukisa Izakhiwo Zomzimba Nezokuhlelwa Zepulasitiki
I-Flaky kanye ne-fibrous fillers ingakwazi ukwandisa ukucindezelwa kwezinto, okufana nokuqina okuqinisa kukhonkolo kasimende kanye nezinto ze-anisotropic ezintweni eziningi ezithuthukisayo (ipulasitiki, irabha, i-resin, njll.). Ukusebenza kwayo okuvame kakhulu kuse-fiber fiber, kepha i-carbon fiber iyabiza kakhulu futhi inomkhawulo ku-luster, ngakho-ke, kunzima ukuyisebenzisa.
I-Asbestos ilinganiselwe ngokuqinile ekusebenzeni kwayo imbangela umdlavuza. I-fiber engilazi eyenziwe kahle (isib. Ububanzi be-1 micron noma ileveli ye-nanometer) ibhekana nobunzima obuningi ekwakheni futhi intengo yayo nayo iphakeme. I-Granular filler, kufaka phakathi i-micron quartz powder ne-kaolin powder evame emhlabathini owomile ama-mica awunawo lo msebenzi onjengesihlabathi namatshe kukhonkolo lukakhonkolo.Kuphela uma ungeza i-filler njenge-wet mica powder emanziukuphakama kwesilinganiso-ubukhulu ubukhulu, amandla amancane, umthelela wamandla, imodulus nokunwebeka nezinye izinto, ukuqina kwesimo (okufana nokushisa kwe-denaturation kanye ne-anti-torsion ukukhathala kokuguquguquka kokuguquguquka), futhi ukusebenza kwe-anti-dress kuzothuthukiswa kakhulu.Kucwaningwe kakhulu ngalokhu ngalokhu kwenziwe kwi-Equipment Science. Isihluthulelo esisodwa osayizi bama-fillers.
Amapulasitiki (isib. Resin) akhawulelwe ngokuya ngobulukhuni ngokwabo. Izinhlobo eziningi ze-filler (isb, i-talc powder) ziphansi impela emandleni abo emishini. Ngokuphambene nalokho, ngokuba ngesinye sezakhi ze-granite, i-mica ihamba phambili ngobulukhuni namandla emishini. Ngakho-ke, ngokungeza i-mica powder njenge-filler emapulasitiki, umphumela wokukhulisa uzoba mkhulu impela. Isilinganiso esiphakeme sobukhulu obukhulu bungukhiye womphumela wokukhulisa we-high-purity mica powder.
Ukwelashwa kokuhlanganisa i-mica powder kunendima enkulu kulolu hlelo olungenhla ngoba kungathuthukisa ngokumangazayo ubuqotho bamakhemikhali bezinto zokwakha, okwenza kukhuliswe kakhulu ukusebenza kwezinto zokwenziwa. Ukwelashwa okuqondile kokuxubanisa nakho kuyisihluthulelo sempahla yokuthuthukisa ye-mica powder, ngakho-ke nokuguqula inqubo ye-crystallization ye-resin. Kusetshenziswa i-mica powder esezingeni eliphakeme kungenza imikhiqizo ithambise kalula. Lolu hlobo lobuchwepheshe lusetshenziswa kabanzi embonini yamapulasitiki, njengokukhiqizwa kwemikhiqizo yamandla aphezulu, kufaka phakathi izingxenye zepulasitiki zemishini nezimoto, izinto zomhlaba, isikhumba sangaphandle sempahla yasendlini, izinto zokupakisha, ukusetshenziswa kwansuku zonke, njll.
(4) Ukwenza ngcono impahla yokufaka yemikhiqizo yepulasitiki
I-Mica inezinga eliphakeme kakhulu lokumelana kukagesi, ngakho-ke iyizinto ezisetshenziswayo eziphakeme kakhulu zokufakelwa uqobo. Sebenzisa i-mica ukwenza ngcono impahla yokufakelwa kwezinto zokwakha ubuchwepheshe obaziwayo. Ukuze kwenziwe imikhiqizo ephezulu yokufakelwa kwepulasitiki, kungafakwa i-mica ye-filler emhlabathini esebenza kahle njengoba kushiwo ngenhla. I-mica enomhlabathi omanzi ayikagezwa okwami ​​futhi iphezulu kokuqukethwe kwensimbi, ngakho-ke ayifanele ukusetshenziswa.
Ukusetshenziswa komhlaba mica emapulasitiki kungaphezu kwalokho. Ngokusebenzisa ngokuphelele izakhiwo ezihlukile ze-mica powder emanzi emhlabathini, imikhiqizo eminingi ebalulekile yepulasitiki nobuchwepheshe bohlelo lokusebenza bungakhiwa ngaphandle. Isibonelo, ngokungeza i-mica powder ku-plastiki, ukusebenza kokuphrinta nezakhiwo ezihlanganayo zingathuthukiswa; ngokuxhasa i-SnO2 ngaphezulu noma ngokubekwa ngensimbi, i-mica powder izoba yinto evumayo futhi ingasetshenziswa ukwenza imikhiqizo eyi-static namapulasitiki okuhambisa; ngokuhlanganiswa ne-TiO2, i-mica izoba yi-pelescent pigment futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni eziningi; ngokuba nombala, i-mica izoba yimibala emihle kakhulu; I-mica futhi ingathuthukisa ukusebenza kokugcotshwa kwemikhiqizo.